Your’s Daily Used Plastics
Since the start of plastic production, around 8.3 billion plastics are produced worldwide, and 90% of them are not being recycled.
China, one of the highest economic countries, is said to be the largest plastic waste generated country according to the data from 2010. An average Chinese person produces 1.1Kg of plastic waste per day.
In our country, the average person generates 0.35 Kg of plastic waste per day in 2017. If the trends continue, the higher the population, the more upper mismanaged plastic shall be used, especially in the rural areas, and villages.
Therefore, have you ever considered how much plastic waste you producedaday? If not, it is time to start considering it. If possible, try to reuse it, make an effort to obey and follow the recycling practices for plastics waste.
Let's try together to make our worldacleaner and greener place.
Burmese version xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
သင်နှင့် သင်၏တစ်နေ့တာ ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှု
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ ပလတ်စတစ်စတင် ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်က စပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ပလတ်စတစ် တန်ချိန် ၈.၃ ဘီလီယံ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ အဲ့ထဲမှ ၉၀%သော ပလတ်စတစ်များ က ပြန်လည်တီထွင်အသုံးပြု (Recycle) နိုင်ခြင်း မရှိပါ။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မှတ်တမ်းများအရ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအများဆုံး ထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့တွင် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏ ၁.၁ ကီလိုဂရမ် အထိရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှတ်တမ်းအရ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် လူတစ်ဦးလျှင် စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် ပမာဏ ၀.၃၅ ကီလိုဂရမ် ရှိပါတယ်။ လူဦးရေ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏလည်း များလေလေပါ။ ကျေးလက် ရပ်ရွာများတွေ မှာလည်း တစ်နေ့တစ်နေ့ ပလတ်စတစ်အသုံးပြုတာများလာသည်နှင့်အမျှ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှုန်း များလာတာကို သိသိသာသာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်တစ်နေ့ကို စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် ဘယ်လောက်စွန့်ပစ်ပါသလဲဆို သင်စဉ်းစားမိပါသလား? မစဉ်းစားမိပါက စတင်စဉ်းစားဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပလတ်စတစ်မသုံးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ မရှိမဖြစ်သုံးမယ်ဆိုင်ရင်လည်း Recycle လုပ်လို့ရတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေကို ရွေးသုံးဖို့ နဲ့ သုံးပြီးသား ပလတ်စတစ်တွေကို သေသေချာချာစုပြီး Rcycle လုပ်တယ့် ဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါ၀င်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
စိမ်းလမ်းစိုပြည် သန့်ရှင်းသော ကမ္ဘာကြီးဖြစ်အောင် အာလုံးစုပေါင်းပြီး အတူတူ ကြိုးစားကြရအောင်။
How can we reduce using single-use plastic bottles?
Impact of Single-use Surgical Masks on Earth 01